Maamulka Gobolka Gedo oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan Kenya oo laga bilaabayo gobolkaasi. – Hornafrik Media Network
Waxaa isa soo tarayay Cabashada shacabka ee ku aadan Xad gudubka Kenya ee dhulkeena Gaar ahaan degmada baladxawo ee Gedo iyo Fal celintooda waxaana hadda marki u horeysay yididiiladaasi ku soo biiray Maamulka Gobolka Gedo.
Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee Gobolka Gedo Cumar Nur Xaaji oo xalay la hadlay idaacada Kulmiye ee Muqdisho ayaa waxaa uu ka dhawaajiyay in ay bilaabayaan dagaal Kenya looga difaacayo dhulka ay ku xadgubeyso ee Gedo kamid ah.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa tilmaamay in ciidanka Soomaaliyeed ee ku sugan degmooyin Gedo ay amreen in la difaaco dhulka lana garab istaago shacabka ka biyo diidsan in ay Kenya darbiga ka dhisto gudaha dalkeena iyadoo ku shegeysa in ay tahay xuduuda labada dal.
Cumar Nuur xaaji Gudoomiye Xigeenka Gobolka Gedo ayaa sidoo kale waxaa uu sheegay in aysan kala joogsi lahayn falka ay Kenya darbiga kaga dhiseyso gudaha degmada baladxaawo iyo xadgudub yada kale ee bar bar socda dhismaha darbiga , baaqna waxaa uu shacabka soomaaliyeed ugu diray meelkasta oo ay joogaan in ay ka qeybqaataan difaaca dhulkeena.
Waxaa ay ahayd talaabo la sugayay in ay maamulka Gobolka Gedo ku dhawaaqi doonaan difaaca dhulka lagu xadgudbayo waxaase jirta in dad badan oo damqanaya ay tabayaan kaalinta dowladda Dhexe ee soomaaliya.